Beeraleyda Baardheere oo Khasaaraha ka soo gaaray Fatahaadii Webigga Jubba | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Beeraleyda Baardheere oo Khasaaraha ka soo gaaray Fatahaadii Webigga Jubba
Beeraleyda Baardheere oo Khasaaraha ka soo gaaray Fatahaadii Webigga Jubba
Qoysaaska noloshooda ay ku tiirsantahay beeraha ayaa waxaa saameyn ku yeeshay fatahaada Webiga Jubba uu sameeyey 23-kii bishan April.
ku dhawada 2321 beerood oo ku teedsan afaafka Webiga Jubba ku waa so ku yaallah 63 tuulo oo hoostaga degmada Baardheere ee gobolka Gedo ayaa fatahaadu sameeysay sida ay sheegeen guddiga iskaashatada beeraleyada degmada Baardheer.
Dalagyada ay fatahaada ay sameeynta ku sheey ayaa waxaa ka mid ah Mooska, Bocorka,Cambaha,liinta,Yaanyo, Basal, Bataati, Basbaas, Qare, Digir,Galley iyo Sisinta oo ay beeraleyda abuureen bilihii febarury iyo Marso ee sanadkan , ku waa soo ay Qorsheynayeen inay goostaan bisha Ramadaan.
C/raxmaan Xaaji Maxamed Ismaaciil oo 60 jir ah oo ku nool tuulada Mardhaa oo Baardheere 9 Km kaga beegan dhanka waqooyi , kana mid ah beeraleyda fatahaaddu ay ka baabi’isay dalagyadoodii ayaa sheegay in 15 hektar oo uu ku beertay dalagyo kale gedisan ayey biyahu kala tageen,C/raxmaan Xaaji Maxamed Ismaaciil ayaa sidokale sheegay inuu beerista dalagyadaan uu geliyey dhaqaale gaaraya $2700 sanadkan.
Previous articleMashruuca Baxnaano waxa uu yimid wakhti ku haboon ! (Qormo)
Next articleGuddoomiyaha gobolka Banaadir Cumar Filish oo shacab dibadbaxayay kula hadlay Daljirka-dahsoon.